पोखरा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक(पूर्ण पाठ सहित) | नाइस खबर - गण्डकी प्रदेश, अरू भन्दा खास
पोखरा,८ असार ।
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगरसभाको आजको बैठकमा नगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले आगामी वर्षको कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । कार्यक्रमको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ ।
– विकासका पूर्वाधार नपुगेका वडाहरुमा महानगरस्तरीय विशेष योजनाहरु सञ्चालनलाई निरन्तरता दिई वडाबासीहरुलाई विकासमा पहुँच मार्फत् सबै वडाहरुलाई समान स्तरमा पु¥याउँदै सबै महानगरबासीहरुलाई समृद्ध महानगरका गौरवशाली नागरिक भएको अनुभूति दिलाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
– महानगरका वडा तथा कास्की जिल्ला भित्र पर्ने गाउँपालिकाहरुमा भरपर्दो यातायातको पहुँच विस्तार गर्न पहल गरिनेछ । महानगरीय यातायात सेवालाई प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउनुका साथै सार्वजनिक यातायातमा ई—टिकेटिङको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
–पोखरालाई नेपालको प्रमुख व्यापारिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा समन्वय गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार ट्राफिक लाइट, पार्किङ तथा सर्भिस स्टेसन, यात्रु सुरक्षाका लागि पैदल मार्ग तथा सरसफाइमा विषेश ध्यान दिइने छ ।
– सहकार्य, सहभावना र सहअस्तित्वको मान्यतामा विकास निर्माणको कार्य अगाडि बढाउँदै लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरिने छ । पर्यटकीय सहर पोखरा र अन्य सहरबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न पोखरासँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गरिएका सहरहरु बीच दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ ।
– डिजिटल सहर गुरु योजना अनुसार सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सूचना प्रविधि मैत्री कक्षा शिक्षण सिकाइ अवलम्बन गरिनेछ । आवश्यक प्राविधिक उत्पादन तथा सबैका लागि शिक्षा अभियानलाई सार्थक बनाउन पहल गर्दै प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा जोड दिइनेछ । प्राविधिक कलेजहरुसँग सहकार्य गर्ने नीति लिइने छ ।
– यस आर्थिक वर्षबाट तालिम सञ्चालनको लागि स्रोत केन्द्र स्थापना गरी तालिमको माध्यमबाट नागरिकको सीप र क्षमताको विकास गरी रोजगारको अवसर सिर्जना गरिनेछ । छिटो छरितो र प्रविधियुक्त सेवा प्रवाह गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
– ‘हाम्रो चाहना, पर्यटन मैत्री निर्माण संरचना’ लाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाइ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० र प्रदेश भ्रमण वर्ष २०१९ लाई सफल बनाउन आन्तरिक भ्रमणमा विशेष प्राथमिकता दिएर ‘पहिले देश ,अनि विदेश’ अभियानलाई विशेष जोड दिइनेछ ।
–अनुसन्धान र विकासको वातावरण सिर्जना गर्न महानगर अनुसन्धान केन्द्र निर्माणको नीति लिई वैज्ञानिक आविष्कार अनुसन्धान र प्राज्ञिक कार्यमा संलग्न युवा वैज्ञानिकहरु, अनुसन्धाता र प्राज्ञहरुका रचनात्मक कार्यहरुमा आवश्यक सहयोग पु¥याइनेछ ।
–श्रमिकहरुको तथ्यांक संकलन गरी पञ्जीकरण तथा सीप विकाससहित योगदानमा आधारित उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्न पहल गरिनेछ । साथै विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गरी समृद्ध महानगर निर्माणको नीति लिइनेछ ।
– वडा कार्यालयहरुलाई अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न सहज हुने गरी पूर्वाधारयुक्त कार्यालय भवन निर्माणको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै यस आर्थिक वर्षमा महानगर भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ । साथै यस आर्थिक वर्षमा ९ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
– गाउँ र सहर जोड्न तथा वडा—महानगर केन्द्र जोड्नका लागि कनेक्टिङ सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी बहुवर्षीय आयोजना अगाडि बढाई सहज यातायात आगमनको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
– सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सिर्जनाचोकमा आकाशे पुल निर्माण सम्पन्न गरिने छ । साथै ओभरहेड र सबवे संरचना निर्माणको लागि अध्ययन, डिजाइनको कार्य अगाडि बढाइने छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणमा सहरी क्षेत्रका मुख्य बजारमा बहुतला पार्किङ निर्माण गर्न पहल गरिने छ । ।
– महानगर क्षेत्रमा पार्किङ व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । यातायातमा सहजता ल्याई तथा पैदल यात्रुहरुको सुविधालाई समेत मध्यनजर गरी हाल सडक छेउमा पार्किङ गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । व्यक्तिगत तथा संस्थागत खाली जग्गाहरुको पहिचान गरी त्यस्ता जग्गाहरुलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार कमर्सियल पार्किङको रुपमा प्रयोगमा ल्याइने छ ।
–उपयुक्त स्थान पहिचान गरी अटो भिलेज निर्माण गरिने छ ।
– दिनानुदिन सवारी चाप बद्दै गइरहेको अवस्थामा सहरका तपसिलमा उल्लेखित सडकहरुमा भवन नक्शापास गर्दा अनिवार्य रुपमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाएर मात्र नक्शापास स्वीकृति प्रदान गर्ने नीति लिइने छ ।
– कुनै व्यक्ति÷संघ संस्थाहरुले आफ्नै लगानीमा पार्किङ भवन वा पार्किङस्थल निर्माण गर्न चाहेमा त्यस्ता भवनहरुको नक्शापास दस्तुर मिनाहा गरिने छ ।
– उज्यालो पोखरा कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा स्मार्ट ग्रिड सडक बत्ती राख्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनुका साथै मुख्य स्थानमा पिउनेपानी सहितको सर्भिस स्टेसन, जग्गाको उपलब्धता हेरी आवश्यक स्थानमा सार्वजनिक शौंचालय निर्माण गरिनेछ ।
– सार्वजनिक यातायातमा वैज्ञानिक भाडा दर कायम गरेर ई—टिकेटिङ लागू गरी मेट्रो कार्ड मार्फत् भाडा बुझाउन मिल्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने छ । सहरका मुख्य चोकहरु महेन्द्रपुल, पृथ्वीचोक र सिर्जनाचोकमा ट्राफिक लाइट राखिने छ ।
–महानगर क्षेत्रको व्यवस्थित, दीर्घकालीन एव वातावरणमैत्री एवं दीगो विकासको लागि भू—उपयोग गुरु योजना तर्जुमा गरी आवास क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, खुल्ला एवं हरियाली क्षेत्र, सार्वजनिक पार्क, वन, कृषि तथा सुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
– मुख्य सहरी सडक अस्फाल्ट कंक्रिट गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । पोखरा १७ को आरटिओ सडक नमुना सडकको रुपमा अगाडि बढाइने छ । कृषि सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । घारीपाटन दोबिल्लाहुँदै पँुडीटार सडकलाई नमुना सडकको रुपमा विकास गरिने छ ।
– पोखरा सभागृहको मर्मत सम्भार कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाइने छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभाहल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अगाडि बढाइनेछ । पोखरा सभागृहको पश्चिमपट्टी करिब २ सय ५० सिट क्षमताको मिनी सेमिनार हलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
– सेती गर्जलाई साहासिक पर्यटन पूर्वाधारको रुपमा विकास गरिने छ । पातलो छाँगोमा सिसापुल निर्माण गर्ने र सराङकोटमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको र यस आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
– यस अघि नै घर, भवन र भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरेका तर विभिन्न कारणले नक्सापास प्रमाणपत्र नलिएका संरचनालाई विशेष व्यवस्थासहित कानुनी दायरामा ल्याई नियमित गरिने छ । मापदण्ड विपरीत संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिने छ । २० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी लागतमा निर्माण भएका भौतिक संरचना तथा विकास आयोजनाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न तेस्रो पक्ष मार्फत् विकास निर्माणलाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाइने छ । साथै निर्माण सामग्रीको गुणस्तर जाँच गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गरिने छ ।
– महानगरपालिका भित्र विगतदेखि सञ्चालित क्रमागत योजनाहरूलाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिइनेछ भने मर्मत सम्भार कोषलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लगिने छ । ढलको उचित व्यवस्थापनका लागि यस आर्थिक वर्षमा गुरु योजना बनाई अगाडि बढाइने छ । मर्मत इकाइको व्यवस्था गरी मर्मत कार्य थप प्रभावकारी बनाइने छ ।
– लामे आहालमा निर्माण गरिने आधुनिक बसपार्कको डिपिआर तयार भइसकेकाले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी यस आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य सुरु गरिने छ । साथै पृथ्वीचोक बसपार्क निर्माणका लागि समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्रिया अगाडि वढाइने छ ।
– प्रशासन र सेवा प्रवाह सुधारको कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ । यसै आ.व. देखि कर्मचारी र पदाधिकारीको बिमा गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
–श्रमको सम्मान तथा सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कम्तीमा एक वर्ष अवधि सेवा गरेका कर्मचारीको संचयकोष कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
– कर्मचारीको क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिदैं बौद्घिक श्रमको मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको विकास गरिनेछ ।
– कर्मचारीलाई वार्षिक एक पटक सात दिन कार्यालयले तोकेको समयमा खर्च सुविधा सहितको अनिवार्य भ्रमण बिदाको सुरुवात गरी आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
– नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको सहकारी, सार्वजनिक र निजी तीन खम्बे अर्थ नीति अनुसार महानगरबासीहरुको आर्थिक विकासको निम्ति एक वडा एक नमुना सहकारी, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।
– दैनिक उपभोग्य बस्तु, कृषि, वन, मत्स्य तथा पशुजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने सहकारी संस्थाहरुलार्ई छुट तथा अनुदानको व्यवस्था गरिनुका साथै सुपथ सहकारी पसल सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाइनेछ ।
– खानी तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गरिनेछ ।
–सार्वजनिक जग्गाको लगत अधावधिक गर्दै २०७५—०७८ लाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको वर्ष घोषणा गरे अनुरुप सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।
– सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिई साक्षर महानगर अभिायनलाई अगाडि बढाइने छ ।
– अनुसन्धान र खोजमूलक शिक्षामा जोड दिँदैं एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री विद्यालय संचालन गरिनेछ । साथै पोखरा प्राविधिक शिक्षालय संचालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । महानगर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना गरी विविध विषयवस्तुको अध्ययन अनुसन्धान गराइनेछ ।
– सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विधार्थीको प्रोत्साहनको लागि महानगर छात्रवृति कार्यक्रम लागू गरी प्राविधिक शिक्षा अध्ययन अध्यापनमा जोड दिइनेछ ।
– महानगरपालिका भित्र रहेका प्राविधिक धारका शिक्षालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई महानगरको समन्वयमा विभिन्न स्थानहरुमा अभ्यास शिक्षणको प्रबन्ध मिलाइने छ ।
– आधुनिक र व्यवस्थित पशु बधशाला निर्माणको लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा काम अगाडि बढाइनेछ ।
– अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर तथा विषादीयुक्त फोहोर व्यवस्थापनको लागि एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
– आवश्यक सेवासहितको थप सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्घन केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, भ्याक्सिन र खोपहरु निशुल्क गरिने छ । एक वडा एक स्वास्थ्य संस्थाको नीति अनुरुप काम अगाडि बढाइनेछ ।
– सबैको लागि स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम वडा वडामा सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्दै बिमा अन्तर्गतको सेवा चुस्त दुरुस्त पार्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
– महानगरभित्र सञ्चालित अस्पताल, फार्मेसी लगायत निजीस्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमित अनुगमन तथा नियमन गरिने छ ।
– महानगरका ग्रामीण बस्तीहरुमा स्थानीय अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिँदैं स्थानीय उत्पादन विक्रीको बजार व्यवस्थापनको लागि कृषि उपज बजार केन्द्र स्थापनामा जोड दिइनेछ ।
– महानगर भित्रका साना तथा ठूला व्यवसायलाई अनिवार्य दर्ता एंव नवीकरणको व्यवस्था गरिनेछ । फुटपाथ व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्दै एकीकृत बजार व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ ।
–महानगर भित्रका ९ वटै तालहरुमा भएको अतिक्रमण रोकी तालहरुको संरक्षण, प्रवद्र्घन र विकास गर्नुका साथै ताल वरपर पैदल मार्ग निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
–फेवाताल जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण कार्य यसै आ.व. मा सम्पन्न गरिनेछ । पोखरामा व्यवस्थित ढल निर्माण तथा ढल डाइभर्सनको विस्तृत योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
–वातावरण संरक्षणको लागि वातावरण संरक्षण कोषको व्यवस्था गरिनेछ । हरियाली प्रवद्र्घन तथा उत्पादनमा प्रोत्साहन दिनको लागि एक विद्यालय दश फलफूलका बिरुवा, एक वडा एक बगैंचा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सडक छेउछाउको हरियाली प्रवद्र्घन गर्दै ‘क्लिन पोखरा, ग्रिन पोखरा अभियान’ सञ्चालन गरिने छ ।
– शान्तिवन बाटिकालाई बोटानिकल गार्डेनमा रुपमा विकास गर्नुका साथै सुन्दरीडाँडास्थित पचभंैया सामुदायिक वनक्षेत्रलाई जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रको रुपमा विकास गरी सुनाखरी संरक्षण क्षेत्र पञ्चासेको विकास एंव प्रवद्र्घनमा जोड दिइनेछ ।
–पुम्दीकोट, ठूलाकोट कालभैरव, तालबाराही (बेगनासताल), भद्रकाली र सराङकोट क्षेत्रहरुमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवं संरक्षण गरि धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
– कृषि क्लब गठन गरी ‘एक हप्ता एक दिन खेतबारीमा केही छिन’ अभियान मार्फत् श्रमको वातावरण तयार गरिनेछ । बाँझो जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुका साथै सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
–मेयर प्रविधिमैत्री कृषि परियोजना मार्फत् उत्पादन वृद्घि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कृषि तथा पशुपालनलाई व्यावसायिकरण,यान्त्रीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्नुका साथै विभिन्न ठाउँमा कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण गरिनेछ ।
–न्यायिक समिति मार्फत् प्रदान गरिने सेवालाई मेलमिलाप तथा मध्यस्तताको माध्यमबाट थप प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने छ ।
– एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, टुहुरा, सिमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका लागि यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक पहल गरिने छ ।
– महानगरपालिका क्षेत्रमा जग्गा खण्डीकरण गरी बिना स्विकृति प्लटिङ गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । एकीकृत जग्गा विकास योजना तयार पारी स्विकृति नलिएसम्म कित्ताकाट र नक्सापास तथा अन्य भौतिक संरचनाको निर्माणको सिफारिस तथा स्विकृति रोक्का राख्ने नीति लिइनेछ ।
– सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक भाडा दर कायम गरी ई—टिकटिङ लागू गर्नुका साथै डिजिटल विज्ञापन प्रणालीको अवलम्बन गरिने छ ।
– वडा कार्यालय तथा विद्यालयमा सिसिक्यामेरा जडान गर्नुका साथै मुख्य सहरी क्षेत्रमा समेत सिसि क्यामरा विस्तार गरिँदै लगिनेछ ।
–‘समृद्घि र विकास निर्माणको आधार, सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिलालाई समान व्यवहार’ को नारालाई आत्मसाथ गर्दै महानगर क्षेत्रभित्र महिला सशक्तीकरण र उद्यमशीलता विकासको लागि उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
– महिला उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी प्रवद्र्घनका लागि ५० महिला ५ सय रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइ सञ्चालन गरिने छ ।
– क्षमता तथा सीप विकास अभिवृद्घि गर्न महानगरीय सिप विकास केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिनेछ ।
– सीप विकासबाट उत्पादन गरिएका सामानहरुलाई बजारीकरण गर्नका लागि उपहार केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
–महानगर क्षेत्र भित्र रहेका युवा क्लब र सामाजिक संघसंस्थालाई सूचिकृत गरी युवालाई व्यवसाय तथा उद्यममा प्रेरित गर्दै वेरोजगारी समस्या समाधान गर्न युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत् युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै कृषि तथा पशुपालनमा युवालाई प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
– महानगर युवा परिषद् तथा खेलकुद विकास समिति गठन गरिनेछ । गोस्तेघाट, भण्डारढिक, आर्बा र विजयपुरमा आधुनिक खेल मैदान निर्माण गर्नुका साथै वडा नम्बर २० मा हाइअल्टिच्युट खेल मैदान निर्माण गरिने छ । एक वडा एक खेल मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– महानगरपालिकाका जनतालाई सफा र स्वच्छ पिउनेपानी उपलब्ध गराउन जनतासंगको सहलगानीमा खानेपानी मूलको संरक्षण गर्दै लिफ्टिङ पद्घत्तिलाई प्राथमिकतामा राखि ‘एक घर एक धारा’ अभियानलाई जोड दिइनेछ ।
– जापानी सहयोग संस्था जाइकाको सहयोगमा संचालित खानेपानी आयोजनालाई सहज र सरल ढंगबाट अगाडि बढाउन आवश्यक पहल एवं समन्वय गरिनेछ ।
– महानगर विपद् कोष सञ्चालन एंव व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । विपद् उद्धार तथा राहत कार्यमा युवा परिचालनका लागि महानगर प्रमुखसँग युवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–विद्यालयमा स्थानीय भाषामा कक्षा सञ्चालनको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी सम्बन्धित भाषाभाषीहरुको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका विद्यालयमा लागू गर्न सुरुवात गरिनेछ ।
–परम्परागत तथा मौलिक पेशा, व्यावसाय र लोपोन्मुख कला, ज्ञान र सीपको पहिचान गरी सोको संरक्षण र सम्वद्र्घनका कार्यक्रम बनाई लागू गरिनेछ ।
– होमस्टेहरुमा स्थानीय नृत्य तथा मौलिक भेषभुषा तथा संस्कृति झल्कने कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिँदैं सांस्कृतिक ग्राम निर्माण गर्न पहल गरिनेछ । एतिहासिक र पुरातात्विक मठ मन्दिरहरुको मर्मत तथा संरक्षणमा जोड दिइनेछ ।
– शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, संस्कृति, कला साहित्य आदिको विकासमा योगदान पु¥याउने व्यक्तिहरुलाई महानगर स्थापना दिवसमा नवरत्न सम्मानद्घारा सम्मानित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
← पहिरोले नारायणगढ मुग्लिन सडकको जलविरे खण्डमा एकतर्फी मात्रै
पेस्तोल सहित विप्लव समूहका २ कार्यकर्ता पक्राउ →